Hiigsiga & Koboca 3M | Saint Paul Historical
Hiigsiga & Koboca 3M
Koboca 3M laga bilaabo bilowgeedii iska hooseeyay ee 1902 ilaa ay ka noqotay shirkad caalami ah waxaa sabab u ahaa himilada iyo dedaalka.
Afarta shirkadood ee aasaasay waxay lahaayeen hiigsiga warshadaynta korondhamka si loogu isticmaalo macdan baaleeska, ka dib waxay isku beddeshay baaleesyada marka warshadaynta macdantu fashilantay. Dedaalkooda iyo maalgelinta farsameed ee Lucius P. Ordway waxay u hogaamisay shirkadu inay u guurto Saint Paul wixii gaadiid raac wanaagsan iyo suuqyo ah sanadkii 1910.
Cilmibaadhida Furaha ilaa Koboca
Koboca shirkada labbadii jiil ee u horeeyay waxaa hagahay 3M aad uu su’aal badan oo la dhiirgeliyay. Marka shirkada warqadda baaleeskeedu bilaabmay inuu fashilmo, William L. McKnight waxa uu bilaabay cilmi baadhida iyo barnaamijka maamulka tayada si loo xaliyo dhibaatooyinka. labbadan siyaabood, siiba dareen ku jeedinta baahiyaha macmilka iyo talo bixinta, waxay ahaayeen xoogaga hagaya ee ka dambeeyay koboca 3M.
Sanadkii 1977, marka 3M ay u dabaal degaysay sanad guuradii 75naad, waxay ku qiyaastay in doolar kasta oo cilmi baadhiga lagu kharash gareeyay laga bilaabo 1926 ( sanadka ka dambeeay bilaabidii xabagta qaybta aan la rinjiyaynayn lagu xidho), ay keentay in ka badan $20 doolar oo wadarta iibka ah. Sidoo kale waxaa lagu qiyaasay in 25 boqolkiiba mugga iibka sanad kasta ay ka timaado alaabta cusub ama la horumariyay ee la bilaabay shantii sano ee ka horaysay.
“Dadka, maya doolarka, waxay sameeyaan alaabta cusub iyo teknoolajiyada.” — Harry Heltzer, Guddoomiyaha Guddida, Shirkada 3M, 3M Buuga Qoraalada iyo maqaalada, 1977.
“3M waxay ku tiirsantahay qorshaha, malaynta, caqli wanaagsan hindisida, xirfada, iyo dedaalka dhammaan dadkeeda.” — Buug yaraha Shaqaalaha 3M, 1955
Waanu shaqaynaa, Waanu soo saarnaa
Shirkadu waxay si aad ah u maalgelisay raasamaalka aadamaha, iyagoo aqoonsan in shaqaalaha wanaagsan ay muhiim u ahaayeen koboca iyo guusha ganacsigaa. Si loo soo jiito shaqaalaha takhasuska leh, 3M waxay bixisay mushahaarooyinka todobaadka iyo mushaharada aadka u wanaagsan. Waxay ahayd mid ka mid ah shirkadaha Maraykanka ugu muhiisan ee siisa dheefo lacageed shaqaalaha, ay ka mid tahay wakhtiga fasaxa lacagta la bixiyo iyaddoo ku salaysan muddada adeega. Waxay bixisay caymiska caafimaadka iyo caymiska nolosha bilowga 1930kii. Sidoo kale 1931, ka hor soo bixitaanka barnaamijyada dowladda, waxay bixisay qaab magdhow shaqo la’aanta ah. Qorshihii lacagta hawl gabka ah ee shirkada u horaysay waxaa la bilaabay 1930, laakiin waxaa la joojiyay bilowgii barnaamijka amniga bulshadda ee federaalka (social security).
Qorshaha lacagta hawlgabka waxaa dib loo soo bilaabay 1943, iyaddoo da’da lagu hawlgabayo 65 ay tahay raga iyo 60 oo haweenka ah. Qorshaha shaqaalaha iibsiga saamiga shirkada ee u horeeyay waxaa la bixiyay 1928. Marka qorshaha iibsiga saamiga dibloo eegay la hirgeliyay 1949, saddex meelood oo halkii u qalmaayay ayaa ku biiray.
Shirkada waxay dhiirgelisay xayaysiinta gudaha iyo wareejinta gudaha ah, iyaddoo garowsan in ay tahay habka ugu wanaagsan ee lagaga faa’iidaysto kartida shaqaalaheed. Muddada shaqaalaha iyo daacadnimada waxaa lagu aqoonsaday xafladda abaalmarinta adeega sanadlaha ah, ee la bilaabay 1948.
Bulshadda Carlton waxaa la aasaasay 1963 si loo aqoonsado 3Mers wixii cilmi baadhida ah, casriyaynta, iyo guul gaadhida cilmiyeed.
Dabaal dega horumarka la gaadhay
Marka 3M ay 50 gaadhay sanadkii 1952, waxbadan ayay u dabaal degaysay. Shirkadu waxay ka samata baxday dhibaatooyinkeedii hore oo waxay u kobocday si isdaba joog ah ilaa markii ay bixisay macaash qaybisga saamigeeda 1963. 3M International ayaa la dhisay 1951. Xaflad wayn oo ay ka soo qayb galayaan 11,000 oo qof ayaa lagu qabtay masraxa Shacabka Saint Paul. Waxay ku sifaysnayn Calvacde of Cars tobon kasta oo sano oo jiritaanka 3M ah, ay ku dhammaystirantahay fuulayaasha lebisan, maaweelada muusiga, iyo ciyaarta muusiga ee Guy Lombardo iyo okestarahiisa.
Sanadkii xigay 3M waxay ku dhawaaqday in $3 milyan dhisme shaybaadh ah laga dhiso cidhifka barri ee Saint Paul. Tani waxay ahayd bilwogii Xarunta 3M.
Dabaaldega sanad guurooyinkii 75naad iyo 100laad aad ayay ugu hooseeyaan xaga amhiyada. Mid kasta waxay ku calaamadsanayd daabcaada diiwaanisay taariikhda shirkada. Sanadkii 1977, shirkada waxay lahayd shaqaale 80,000 oo ku firidhsan 40 wadan oo leh iibka go’an ee 3.5 bilyan. Sanadii 2002, tirooyinkan waxay ugu dhowaan ahaayeen 75,000 shaqaale ah gudaha 60 wadan oo leh iibka go’an ee $16.3 bilyan.
Mid ka mid ah hawl galada macdan qodista oo yara qarsoonaana ayaa u beddelmay wax ka fog riyooyinkii aasaasayaasheedii asalka ahad.
Xafiiska Two Harbors : 3M began in Two Harbors, MN in 1902. The original office is still standing and now home to the 3M Museum. ~ Source: Minnesota Historical Society
Crystal Bay mine ~ Source: Minnesota Historical Society
William McKnight, Guy Lombardo, iyo Archibald G.sh oo baabuur badan saaran xaga Masraxa madaniga ah ee Saint Paul . ~ Source: Minnesota Historical Society
Xarunta 3M 1941. ~ Source: Minnesota Historical Society
Marjorie Pearson, Summit Envirosolutions, Inc., “Hiigsiga & Koboca 3M
,” Saint Paul Historical, accessed February 19, 2019, https://so.saintpaulhistorical.org/items/show/384.